सुगर देखि नआत्तिनुहोस् यसरी खाना खान जान्नुभयो भने नियन्त्रण हुन्छ- डा.ज्योती भट्टराई – ताजा समाचार
डा‍. ज्योती भट्टराई मधुमेह रोगको सन्र्दभमा निक्कै चर्चित नाम हो । उहाँले थुप्रै मधुमेह रोगीलाई उपचार सेवा दिइसक्नुभएको छ ।
उहाँले यो रोग नियन्त्रणका विभिन्न उपायको खोजी गरिरहेको हुनुहुन्छ। अचेल उहाँको मेट्रो काठमाडौं अस्पतालमा मधुमेह भएर गएपछि हरेकले ‘डाइट क्लास’ लिनैपर्छ। यो कक्षामा डाइटिसियनले मधुमेह भएपछि के खाने, के नखाने, मात्रा मिलाएर कसरी खाने आदिबारे जानकारी दिन्छन्। हामीकहाँ मधुमेह भएपछि यो पनि खान हुन्न, त्यो पनि खान हुन्न भनेर शरीर कमजोर बनाएर आउने धेरै छन्’, डा. भट्टराई भन्नुहुन्छ, त्यसैले यस्ता बिरामीका लागि काउन्सिलिङ जरुरी छ भनेर नियमित कक्षा लिन लगाउँछु।
र यो पनि पढ्नुहोस् : डा. रूपक भन्नुहुन्छ सुगरका बिरामीले बेग्लै खाना खानु जरुरी छैन, स्वास्थ मुलक जानकारी अवश्य पढ्नुहोस
र यो पनि पढ्नुहोस् : मधुमेह रोगीका लागि वि ष सरी हुन् यी खानेकुरा, बिर्सेर पनि नखानुहोस्
अन्तिम पटक अपडेट गरिएको : March 9th, 2020,